Global Voices teny Malagasy » Mpikatroka mpanoratra an-gazety Vietnamiana nosamborina ho manao ‘fampielezan-kevitra manohitra ny fanjakana’ · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 20 Oktobra 2020 5:32 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Atsinanana, Vietnam, Fahalalahàna miteny, Fitantanam-pitondrana, Lalàna, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona, GV Mpisolovava
Lahatsary fanadihadiana niaraka tamin'i Pham Doan Trang tamin'ny taona 2018. Loharano: Pikantsary tamin'ny lahatsary Youtuben'i Člověk v tísni
Nosamborin'ny  polisy tamin'ny 6 Oktobra ilay mpikatroka sady mpanoratra an-gazety Vietnamiana malaza Pham Doan Trang noho ny fiampangana  azy ho “mitarika fampielezan-kevitra manohitra ny Repoblika Sosialista ao Vietnam” araka ny Fehezan-dalàna Famaizana andininy faha-88 nivoaka tamin'ny taona 1999, sy “manangana, mitahiry, manaparitaka vaovao, fitaovana, zavatra hanoherana ny Fanjakana Repoblika Sosialistan'i Vietnam” araka ny Fehezan-dalàna Famaizana andininy faha-117 nivoaka tamin'ny taona 2015. Mety hiatrika sazy an-tranomaizina hatramin'ny 20 taona izy raha voaheloka.
Anisan'ny birao mpamoaka lahatsoratra amin'ny Gazetiboky Vietnamiana i Doan Trang. Nanorina ny gazetiboky antserasera momba ny lalàna Luat Khoa izy. Iray amin'ireo mpanorina ny Liberal Publishing House ihany koa izy izay nogiazan'ny manampahefana ireo boky momba ny demokrasia tao. Niara-nanorina ny Vietnam Legal Initiative, FTMF iray ao Etazonia miasa ho fampiroboroboana ny zon'olombelona ao Vietnam ihany koa izy.
Nanoratra ireto boky manaraka ireto i Doan Trang: Politika ho an'ny Sarambabem-bahoaka, Boky kely ho an'ny Fianakavian'ireo Voafonja, Momba ny Teknikam-panoherana Tsy Mahery setra, Politikan'ny Fanjakan'ny Polisy sy ny Fanoratan-gazetin'Olom-pirenena.
Efa nosamborin'ny  polisy noho ny andraikiny tamin'ny fihetsiketsehana manohitra ny fidiran'i Shina tao amin'ny faritany amoron-dranomasin'i Vietnama sy tamin'ny hetsi-piarahamonina manohitra ny fandotoana tontolo iainana ihany koa izy taloha. Tamin'ny tafatafa maromaro, nitantara ireo fanafihana sy herisetra nianjady taminy teo am-pelantanan'ny polisy izy.
Ny alina nisamborana an'i Pham Doan Trang. (6 Oktobra 2020)
Tsy voalaza mazava izay nahatonga ny fisamborana azy. Mety misy ifandraisany amin'ny lahatsorany momba ny famoretan'ny governemanta ireo mpiaro ny zon'ny tany na ny asany miaraka amin'ny Liberal Publishing House izany. Antony iray hafa ny mety ho fifandraisana amin'ny fiomanana amin'ny fiarovana ny fahamaroan'ny Antoko Komonista tamin'ity volana ity satria narahana fisamborana mitovy amin'izany izay mikendry ireo mpanohitra sy mpanoratra tsy miankina ireo fivoriana teo aloha.
“Raha sendra ka voafonja aho”
Naminavina ny fisamborana azy hatramin'ny volana mey 2019 i Doan Trang, izay niatrika fandrahonana sy fanarahamaso tsy tapaka avy amin'ny polisy. Nangataka tamin'ny namany izy mba hamoaka taratasy mitondra ny lohateny hoe “Raha sanatria ka gadraina aho” raha sanatria ka voasambotra izy.
Navelan'i Pham Doan Trang tamiko io taratasy io, mba havoaka rehefa voasambotra izy. Zarao azafady.
Tao amin'ny taratasiny, nangataka tamin'ireo izay hanao fampielezan-kevitra ho an'ny fahafahany izy mba hanao laharam-pahamehana ireo voafonja hafa noho ny fanehoan-kevitra. Nanoratra momba ny filàna fampielezan-kevitra ho an'ny fanavaozana demaokratika any Vietnam ihany koa izy:
Tsy mila fahafahana ho an'ny tenako irery aho, ho mora loatra izany. Mila zavatra lehibe kokoa aho: fahafahana sy demaokrasia ho an'i Vietnam manontolo. Mety hitovy amin'ny tanjona lehibe iray io, saingy azo tanterahana feno, miaraka amin'ny fanohananareo.
Nanampy izy fa tsy “hanaiky ho meloka, tsy hiaiky heloka ary tsy hangataka famindram-po” satria tsy meloka izy. Manana antso manokana izy:
Alefaso aty amiko ny gitarako ary andramo mba hanaiky izany ireo mpiambina – Ho ahy, tahaka ny Baiboliko ny gitara.
Namoaka fanambarana ho fanohanana an'i Doan Trang ireo mpisolovava mpiaro zon'olombelona sy vondrona fampahalalam-baovao. Nanoratra  momba ny maha-zava-dehibe ny asan'i Doan Trang amin'ny maha mpanoratra an-gazety sy mpikatroka azy i Tran Quynh Vi, talen'ny famoahana ao amin'ny Vietnamese Magazine:
Mpanoratra an-gazety hajaina indrindra izay nivelatra tamim-pahazotoana ny vaovao politika sy ara-pitsarana ho an'ny besinimaro tao Vietnam i Pham Doan Trang, nandrisika ny olona hampihatra ny lanjan'ny fahalalahana sy ny demokrasia manerantany izay voalaza mazava ao amin'ny lalàmpanorenan'i Vietnam izay notohanan'ny governemanta tao amin'ireo fifanarahana iraisampirenena maro nosoniaviny izy.
Hugo Setzer, filohan'ny Fikambanan'ny Mpamoaka Lahatsoratra Iraisampirenena, nidera  ny ezaka nataon'i Doan Trang namoaka ireo boky momba ny fanavaozana demaokratika:
Nandray ireo fahasahiana ireo tamim-pahalalana i Pham Doan Trang ho fiarovana ny fahalalahana maneho hevitra. Midera ny fahasahiany sy ny herin'ny fahatokisany aho. Rentsika ny antso nataony ho fanavaozana ny fifidianana any Vietnam, saingy tsy maintsy manameloka ny fisamborana azy koa isika ary manentana ny manampahefana Vietnamianina mba hamotsotra azy.
Hatramin'ny nanoratanay ity lahatsoratra ity, efa afaka nandefa  zavatra vitsivitsy ho an'ny filàny manokana ny fianakavian'i Doan Trang saingy mbola tsy nahita sy niresaka taminy mivantana izy ireo.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2020/10/20/150087/
 Luat Khoa : https://www.luatkhoa.org/
 tafatafa : https://globalvoices.org/2019/07/01/new-documentary-series-highlights-the-struggles-of-women-activists-in-vietnam/
 asany : https://www.rfa.org/english/news/vietnam/acclaimed-journalist-07102020182218.html
 mety ho fifandraisana : https://www.vietnamhumanrightsdefenders.net/2020/10/07/vietnam-leading-human-rights-defender-pham-doan-trang-arrested-and-charged-with-conducting-anti-state-propaganda-as-communists-hold-plenum-to-prepare-for-13th-national-congress-2/
 Namoaka : https://cpj.org/2020/10/journalist-pham-doan-trang-arrested-on-anti-state-charges-in-vietnam/